Kurapa kweiyo stator uye rotor yakakosha kukanganisa kweakakwira voltage mota
Kana iyo yakakwira voltage mota musimboti ikakundikana, iyo eddy yazvino ichawedzera uye simbi musimboti ichapisa kupisa, izvo zvinokanganisa zvakajairika mashandiro emota.
1. Zvakajairika zvikanganiso zvesimbi cores
Izvo zvakajairika zvikanganiso zvesimbi musimboti zvinosanganisira: pfupi dunhu inokonzerwa ne stator ichitenderera pfupi dunhu kana pasi, arc mwenje unopisa iyo simbi musimboti, iyo inokuvadza kuputira pakati pesilicon simbi machira uye inokonzeresa pfupi dunhu; Yakasununguka simbi simbi inokonzerwa nehurombo kusimbisa uye mota vibration; Iyo yekare ichitenderera yakanganisika nekuda kwekusakodzera kushanda kana yabvutwa, uye musimboti wakakuvara nemuchina simba zvisina hanya kana wapera.
2. Iron core kugadzirisa
Kana ichitenderera pfupi dunhu kana kuvhuvhuta, arc inopisa iyo simbi musimboti, asi isiri yakakomba, inogona kugadziriswa nenzira dzinotevera: tanga kuchenesa simbi yedandemutande, bvisa guruva nemafuta, pisa iyo yakanyungudika yemuno silicon simbi simbi ine diki faira, yakapukutwa. flat, kubvisa hurema hwetepa uye pepa rinonyungudika pamwechete. Ipapo iyo stator simbi musimboti padhuze nepfungwa poi kufefetedza nzvimbo, kuti gadziriso yesilicon simbi jira iine imwe leeway, ipapo peel mhosva poindi yesilicon simbi jira yesimbi, yesilicon simbi jira ichave kutsva pane carbide yakabviswa, uye yakazadzwa ne silicon simbi jira varnish, mune yakatetepa yeakaonda mica jira, kufefetedza kwetangi mukati, chengetedza musimboti sunga.
Kana iyo simbi simbi ikatsva pameno eiyo groove, ingo isa faira resimbi yesimbi yakanyungudutswa. Kana kugadzikana kweiyo yakakomberedzwa kukanganiswa, epoxy resin inogona kushandiswa kugadzirisa chikamu chisipo chemukati.
Kana magumo emazino esimbi epakati akavhurwa axially panze uye zvindori zvekumanikidza pamativi ese zvisina kusimba, gomba rinogona kugadzirwa pakati pemadhisiki akagadzirwa nematare maviri esimbi (ayo dhayamita yekunze iri zvishoma zvishoma kupfuura dhayamita yemukati yemagumo e stator windings) uye mhete inogona kudhonzwa nepakati kuti inamate mativi ese esimbi simbi uyezve sunga iyo stud kuti udzore musimboti kune yayo yekutanga chimiro. Mazino akaputsika anogona kutwasanudzwa nemapapiro emhino akatwasuka.
Jenareta Rotor Core, Rotor Stator, Stator Rotor tsikwa, Rotor Stator tsikwa, Stator Lamination Kuputira, Motokari Stator, Zvese Zvigadzirwa